विकास ऋणपत्रको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च, ५ वर्षमा १५ अर्बको निष्काशन - Nepal Bahas Nepal Bahas
विकास ऋणपत्रको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च, ५ वर्षमा १५ अर्बको निष्काशन
प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलवार १३:०९
७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको असरले विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि बढेको हो ।
आज मंगलबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विकास ऋणपत्र २०८४’ नामक ५ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दै छ । सो ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट भने विगतमा विकास ऋणपत्र खरिदमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन ।
अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन दिन सकिने छ । ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रूपमा सहभागी हुन सकिने छ । प्रतिस्पर्धीको लागि ८५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड र अप्रतिस्पर्धीको लागि १५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार भएको उच्च लगानीका कारण बढेको वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावको समस्याले समग्र वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर बढाएको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थासमेत नभएपछि ऋणको माग कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमै ब्याजदर बढाएको छ ।
विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुने भए पनि ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । यसभन्दा अघि २४ जेठमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको विकास ऋणपत्रमा ५१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बरावरको आवेदन परेको थियो । चार वर्षको अवधिमा परिपक्व हुने ऋणपत्रको कट अफ रेट ९।२० प्रतिशत कायम भएको छ । यो कट अफ रेट ०७० यताकै उच्च हो ।
असर्फीको भाउ बढ्यो, अब प्रतिग्रामकाे मूल्य कति ?
आज अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा
मंगलबार डलरको भाउ थामियो, कुन देशकाे कति छ विनिमयदर ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ वर्षको अवधि राखेर १५ अर्बकाे ऋणपत्र बिक्री गर्दै
पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने छुट मन्त्रीलाई छैन, सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता…
बालबालिकालाई मोबाइल–टिभी धेरै नदेखाउन चिकित्सककाे आग्रह
ओली सरकारमा हुँदा जो बालुवाटारप्रति बफादार छ, उसैलाई मात्र च्याप्ने…
सप्तकोसीमा एक जना बेपत्ता, खोजी गर्न गोताखोर परिचालन
पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्ने छुट मन्त्रीलाई छैन, सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउछाैँ : नेकपा एस
पेट्रोलियमको मूल्य कटौतीदेखि बजार अनुगमनसम्म मन्त्रिपरिषदका निर्णय
पोखराका ठाउँ ठाउमा पहिरो र डुबान, प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
किन कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु मात्र बदनाम ?
आईजीपी कमाण्ड कन्ट्रोल गर्ने, डीएसपीहरु शक्तिकेन्द्र धाउनी
कोटेश्वरमा नेपाल, आले र झाँक्रीबीच चर्काचर्की, बाहिरिन दुई शर्त
राज्य सचेत नहुँदा किसानलाई रासायनिक मल पाउन सकस
पेट्रोलमा २० र डिजेलमा लिटरमै २९ रुपैयाँ घट्यो
चितवनका सात वटै पालिकाले ल्याए ११ अर्ब ६५ करोड बजेट,…
गत वर्षभन्दा ६ अर्ब बढाएर काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यायो २५ अर्ब…
एमालेका प्रतिनिधिलाई मनाएर पोखरा महानगरले ल्यायो ८ अर्ब ७७ करोडको…
सेती नदी खोँचमा ४५ वर्षीय पुरुष मृत भेटिए
एमालेबाट विद्रोह गरेर देशलाई अस्थिर राजनीतिबाट जोगायौं : अध्यक्ष नेपाल
भ्रष्टाचार र महंगीको विरोधमा नेकपा एस जनताको साथमा छ :…
नेकपा एसका ६ सांसदको माधव नेपालसँग सुलह